Mila fanovana… | NewsMada
Hanao ahoana ihany izao fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna izao? Ahina mety ho tonga amin’ny fanaovana fifidianana manokana amin’ny ampahany noho ny tsy fisian’ny kandidà amin’ny kaominina sasany.
Miharihary amin’izao fa tsy sahy miatrika fifidianana ny ankamaroan’ny antoko politika. Be tsy andraofana? Tsy matoky tena, matahotra fitsaram-bahoaka… Mpiandry kendry tohina amin’ny krizy politika hahazoana toerana no be?
Ny sasany indray, mialokaloka amin’ny fanohanana antoko izatsy na izaroa? Saikaizan’ny mpandresy na izay tombanana handresy… Tsy efa mila fiheverana tanteraka amin’izay ve ny amin’ireo antoko politika manamaro isa fotsiny?
Eo ireo tsy sahy miatrika fifidianana, tsy mahahenika ny faritra na ny faritany na ny firenena ny fijoroany, tsy mahavita kongresy; eny, na ny foibe toerana aza, ohatra, tsy hita hoe aiza. Aiza ny hoe tany sy fanjakana tan-dalàna? Mila fanovana…
Olona mivezivezy: miditra an-tsehatra manara-maso ny Folotafo 28/05/2020
Fitantanana orinasa: ao anatin’ny fanarenana tanteraka ny Sirama 28/05/2020
Vondrona Basan: nanome fanomezana tany Antsirabe ny Socolait 28/05/2020
Sitrana avokoa ireo narary tany Fianarantsoa: tonga eny Talatamaty sy niverina eny Soavimasoandro ny coronavirus 28/05/2020